झोल कप प्रतियोगिता | विश्व विनोद
हास्यव्यङ्ग्य विश्व विनोद July 8, 2016, 8:47 am
सबैभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा अचेल बाह्रमासे सम्बन्ध सुधार्न या बिगार्नको लागि झोल कप प्रतियोगिताले पहिलो स्थान ओगटेको पाईन्छ ।झोल भन्या तरल हो सरल हो कि हैन तपाई आफैं चिन्नुस्। अभ्यस्तलाई सरल हुन सक्छ, नत्र यो झोलले तरलको भन्दा बढि महंगो मान्यता राख्न सक्दछ । झोल र कपको संयुक्त मिलन बिन्दु गराएर शरिरमा तरलको सिन्धु चढाउने कार्य प्रतिस्पर्धात्मक कार्य नै झोलकप प्रतियोगिता हो ।
तपाई झोल कपलाई वल्र्ड कप प्रतियोगिता भनेर नझुक्किनु होला ।वल्र्ड कप भन्दा अलिक बढि स्तरिय गुणस्तरिय प्रतियोगिता लाग्न सक्छ तपाईलाई ।वल्र्ड कपमा गोल किपर जस्तै यहाँ झोल किपर पनि हुने गर्दछन् । जस्को काम कप, गिलास, मग, जग, घैंटो, ग्यालिन जे हुन्छ त्यहि समातेर पिउने र जिउने काम गर्नु हो । अझ झोल किपरको अर्को बिशेषता भन्नु बाटामा हिंडेकालाई समातेर भट्टि पसलको रंगशालालाई दंगशाला बनाएर दर्शक बनाउनु र उनिहरुलाई झोल कप प्रतियोगिताको मुख्य आयोजक या प्रायोजक बनाउनु पनि हो । यि झोल किपरको संगत साधु देखि सन्त सम्म, धनि देखि महन्त सम्म हुने गर्दछ । झोल किपरको सबै तहका मानिससँग मिल्न सक्नु महानता हो । मधुशालाको यौटा कुनोमा पसेर दुनो समात्दै गर्दछन् यि झोल कप प्रतियोगिताका महान् झोल किपरहरु ।
झोल कप प्रतियोगितामा कप, गिलास, मग, जग, घैंटो, ग्यालिन जे हुन्छ त्यहि रित्याउने प्रतियोगिता मात्र नभै बिना पुरस्कारको खेल हो यो । कस्ले बढि खाने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा होला नत्र यहाँ जित हारको प्रश्न नै रहँदैन । वल्र्ड चार चार बर्षमा खेलिईरहँदा झोल कप दैनिक चल्ने हुँदा यस्को महत्व बाहुन बा’ले दैनिक गायत्रि मन्त्र गाएको भन्दा पनि बढि महत्वको बिषय हुनसक्छ । गाउँका प्याट्रिकले गिलासका गिलास लडाएर झोलकपमा ह्याट्रिक गर्न सक्दछन् ।वल्र्डकपमा पेलेको चर्चा बढि हुन सक्छ तर मधुशालाको तरलताले घटाएको सरलतालाई बाटोको छेउ कुनो गर्ने अनि मानिस ठेलेर हिड्ने ठेलुवा ठेले पेले भन्दा बढि चर्चित हुन सक्छ गाउँघरमा ।
तासको जोक्कर झैं सुकुटि, आलो मासु, कहिले काहिं ताक नपरेको बेला र धाक लाउन नपा’को बेला लसुन सँग चप्प झोल कपमा राखेर खाईदिदा तरलताको सरलता पनि झलक्क झल्किन्छ । जसरी यौटा वल्र्ड कपले फाईभ स्टार देखि बार तताउँछ यस्ले पनि फाईभ स्टारदेखि र गाउँका भट्टिपसलमा अड्डा जमाएर नाम कमाईरहेको छ झोेलकप प्रतियोगिताले । वल्र्ड कप प्रतियोगिता हुँदा कमैमात्र राष्ट्रले कमाउने गर्दछन् तर झोलकपले जति महंगो कर तिरेको कस्ले होला र त्यसैले यस्लाई राष्ट्रले राष्ट्रिय गौरबको प्रतियोगिता भन्न अत्युक्ति नहोला । यस खेललाई न रेफ्रिको आबश्यकता पर्छ न बिपक्षि खेलाडिको आवश्यकता नै ।एक्लै खेल्न सकिने हुँदा यसको महत्व बेद पुराण र कुरानको भेद भन्दा सफेद छ । झोलकप प्रतियोगितामा कुनै नियम नै छैन अलिक हद भन्दा बढि झोलको सेवन भए घरकी श्रीमतिले रातो अनुहार रेडकार्ड झैं देखाउन सक्छिन् । यस्को खेल मैदान जहाँ झोल मिल्छ त्यहि बन्छ। न यस्को लागि चौडा जमिन चाहिन्छ न बडेमानको रंगशाला नै । फगत जगत् हल्लाउन सक्ने तरल पदार्थ भए यो पर्दाको छेल परेर, भट्टिको कुनामा जहाँ बसेर पनि एकजनाकै भएपनि प्रतियोगिता चलाउन सकिन्छ ।
न मैदान चाहिने न कोर्ट चाहिने अनौठो प्रतियोगिता हो झोल कप । यस्का लागि मात्र तिनपाने देखि बिजुलीपानीको बन्दोबस्त भए कोठा चोटा जहाँ सुकै एक्लै या सामुहिक रसस्वादन गर्न पाईन्छ । वल्र्ड कपमा खेलाडिले यौटा कुनो बाट अर्को कुनो सम्म मैदानको लम्बाई दौडेर नाप्छन् तर यहाँ झोलकपको कमालले तपाईलाई गज्जबको इन्जिनियर बनाउँछ । चट्ट दो चार कप झोल रन्काए पछि तपाईं इन्जिनियर बन्दै बाटोको छेउकुना चारहात खुट्टाले तपाईंले नाप्न थालेपछि तपाई इन्जिनियर नभएर के हुनु भो त ?
झोलकप प्रतियोगिताको लागि कुनै दर्शक र समयको परिबन्ध हुँदैन । लुकि लुकि खान चाहनेलाई किन दर्शकको खाँचो पर्ला र ? झोलकपको लागि मन र धन भए पुग्छ । धन नभए केहि छैन उधारोमा पनि जिन्दगी चलाउन सकिन्छ । वल्र्ड कपमा खेल खेल्दा धेरै देशको सम्बन्ध बिगे्रको देखिएकै छ तर झोलकप त सामाजिकिकरणको यौटा माध्यम पनि हो । कुनै कुरा सोझो मिलाउन नसके तिनपाने पसलमा गएर झोलकप गरे तपाईको काम मज्जाले बन्छ । यस्ले त झन् सम्बन्ध सुधार्छ । झोलको मोल वल्र्डकपको टिकट भन्दा पनि सस्तो हुन्छ । गोजि अनुसार पैसा अनुसार एैसा हुन सक्छ झोल कपको खेलमा ।
वल्र्ड कप पूर्व धेरै राष्ट्रले मैत्रि पूर्ण खेल खेल्दछन् तर झोल कप प्रतियोगिताको लागि सँधै मैत्रिपूर्ण खेल चलिरहेको हुन्छ । वल्र्ड कपको लागि पूर्व अभ्यास चाहिएला तर झोलकपको लागि कुनै पूर्व अभ्यास वा रिहर्सलको आवश्यकता पर्दैन । जसरी जिउन कसैले सिकाउँदैन, त्यसरी नै पिउन कसैले सिकाउनु पर्दैन तसर्थ झोलकप प्रतियोगितामा त्यतिसारो प्रशिक्षकको आबश्यकता पनि पर्दैन । गुरु भन्दा चेला बढि जान्ने भाको फेला पार्नु हुन्छ भने यो खेल झोलकप प्रतियोगिता नै हो । यसले मानिसलाई मैत्रिपूर्ण नै बनाउँछ ।घुलमिलका लागि पनि झोलकप प्रतियोगिता हुनु जरुरी छ । बिग्रका कुरा सपार्न र सप्रेका कुरा बिगार्न झोलकप अत्याबश्यक देखिन्छ ।
झोलकप प्रतियोगिताको इतिहास आदिम काल देखि श्रृष्टिको अन्त्य सम्म रहेको छ र रहनेछ भनि भविष्यबाणि गर्न सकिन्छ ।सागर नसुके सम्म झोल कपका गागर सुक्ने छाँट देखिन्न पनि । वल्र्डकपका देउता एउटा पनि भेट्न र देख्न सकिन्न तर सुरदेव नै झोलकपका आदिम देउता भएको बेदका भेदले खोलेको पाईन्छ । वल्र्डकपमा झैं बिभिन्न शैलिमा खेल खेलिए झैं झोल कप प्रतियोगितामा पनि बिभिन्न शैलिमा कैलिको भट्टि पसलमा थैलि निकालेर झोल खेलाई खेलाई खान पिउन सकिन्छ । घ्याम्पे हान्ने कि ट्यांकि हान्ने कुराको निर्भरता तपाईसँग रहन सक्छ । छिटो छिटो खानुस् या ढिलो ढिलो खानुस् यो पनि तपाईको कुरा हो । सटिक पास वल्र्डकपमा भएझैं सटिक सुर्कोको एक तुर्को घरबारीको सुर्को बेचेर खाएका उदाहरण यहाँ प्रशस्त पाउन सकिन्छ । झोलकपले भुँडि पुराण लगाउनु भयो भने बुढिपुराण घरकी श्रीमतिले लगाउन सक्छिन् ।
झोलकपमा कहिलेकाहि सौजन्य पनि दिन सक्नेहरु मान्य जन हुन्छन् । वल्र्डकपको लागि स्पोन्सर चाहिएला तर झोलकपमा स्पोन्सर भए पनि चल्छ नभए पनि चल्छ । झोलकपमा एक कप कै लागि यहाँ स्पोन्सर चाहिन्न पनि तर धेरै कप रित्याउने मन भए तपाई स्पोन्सरको खोजिमा हिड्न र भिड्न सक्नुहुन्छ । झोल कपले उचो निचो भन्दैन ।ठूलालाई सानो बनाउने र सानो लाई ठूलो बनाउने खेलमा झोलकपको अपरिहार्यता रहन्छ ।झोल खाए पछि शत्रु मित्रु बन्न सक्छ अनि मित्रु शत्रु बन्न सक्छ । जसरी फुटबलको वल्र्डकपको नियम छन् यसका कुनै पिउने नियम छैनन् । सदावहार खेल हो झोलकप प्रतियोगिता । सबैले बुझ्ने खेल हो यो ।ल है साथि यति पढिन्जेल तपाईलाई झोल र कपको खेल याद आएन हँ ? मलाई त झोलको यादले असाध्यै सताई रहेको छ ।त्यसैले म त झोलकप प्रतियोगिता संचालनको लागि हिडे है । तपाई पनि आउने कि कैलिको पसलमा थैली लिएर ? जदौ
बेशिसहर नगरपालिका ७, लमजुङ